May 8, 2021 - Babal Khabar
May82021 by EditorNo Comments
खाने, बस्ने ठेगान नभएपछी, तातो सडकमा पाउरोटीको भरमा २ दिन लगाएर घर फर्किदै मजदुरहरु
गोरखा — काखे बच्चा च्यापेर कान्छी गुरुङ र सदीक्षा गुरुङ पोखराबाट २ दिनको पैदल यात्रापछि गोरखा आइपुगे । दैनिक ज्याला मजदुरीबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरू कोरोना जोखिम बढेसँगै थातथलो चुमनुब्री गाउँपालिका–३ सिर्दिवास फर्किएका हुन् । पोखराबाट पैदल आएका कान्छीका ६ परिवार शुक्रबार दिउँसो तेह्रोकिलोमा पैदल हिँडिरहेको भेटिए । कान्छी गुरुङको ६ महिने छोरी, १० वर्षको छोरा, बुहारी सदीक्षा, ९ महिने नातिनी र श्रीमान् कान्छा गुरुङले १३ किलोसम्मको सडक यात्रा निकै सकसपूर्ण भएको बताए । ‘बिहीबार पोखराबाट निक्लिएको, दमौली आएर बास बस्यौँ । चिनेजानेका एकजना दाइले दमौलीमा खाना खुवाउनुभयो,’ सदीक्षाले भनिन्, ‘आज सबेरै हिँडेको थकाइ मार्न पनि पाएका छैनौँ, बच्चा बोकेर हिँडेको देखेर होला कुनै कुनै गाडीका ड्राइभरले थोरै–थोरै बाटो भए पनि चढाउने र झारिदिने गर्नुभयो । आँबुखैरेनी कटेपछि कुनै गाडी रोकेनन् । अल्ली पर
विपक्षीहरूले गठबन्धन नै बनाएर चुनावमा जाने भएपछि एमाले निर्वाचनबाट तर्सियो
काठमाडौं- जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले ओली समूह एक कदम हच्किएको छ । विपक्षीहरूले गठबन्धन नै बनाएर चुनावमा जाने भएपछि सरकारी एमाले निर्वाचनबाट तर्सिएको छ । बिहिबार आकस्मिक रूपमा स्थायी कमिटि बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले वागमतीबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उम्मेदवार बनाउनुअघि सोच्नुपर्ने भन्दै पछि हटेको संदेश दिएका छन् । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पहिले परिस्थितिको सहि आंकलन गरेर मात्र बादललाई उम्मेदवार बनाउने बिषयमा छलफल भएको बताए। बादललाई उम्मेदवार बनाउनुअघि मतको विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा बताएका थिए । मतको विश्लेषण गरेर मात्र उम्मेदवार निर्णय गरिने ति नेताले बताए । बैठकमा परिस्थिति भनेजस्तो नभए बादललाई चुनावबाट ब्याक गराउनुपर्ने ओलीले संकेत गरेका थिए । बैठकमा वागमती प्रदेशभित्र एमालेको एकल बहुमत रहे पनि माधव नेपाल पक
निजी अस्पतालको शुल्कबारे अनावश्यक हल्ला मात्र : सरकारको निष्कर्ष
२४ वैशाख, काठमाडौं । निजी अस्पतालले कोभिड बिरामीको लागि तोकेको शुल्कबारे अनावश्यक हल्ला भएको निष्कर्षमा सरकारी निकाय पुगेको छ । वाणिज्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीसहितको अनुगमनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सात अस्पतालको स्थलगत अनुगमनपछि उक्त निष्कर्षमा पुगिएको औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘काठमाडौंका सहायक सिडिओसहित विभागका प्रतिनिधिले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सर्वसाधारणको लागि चर्काे शुल्क तोकेको बुझिन आएन, बाहिर अलि बढी हल्ला भएको बुझियो,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने । ‘हाम्रा प्रतिनिधिले ह्याम्स, केएमसी लगायतका अस्पतालमा राउन्ड टेबल कुराकानी गरेको थियो, धनाढ्य र धेरै शुल्क तिरेर सुविधा खोज्नेका लागि सीमित बेडको त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको र त्यो सर्वसाधारणका लागि नभएको पाइयो
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ भन्छन्- अस्पतालले थेग्न नसक्ने अवस्था आएको छैन, अस्पतालको अबस्था यस्तो
२०७८ वैशाख २५ गते १३:५० मा प्रकाशित २५ वैशाख, काठमाडौं । दिनदिनै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या बढिरहेको छ त्यसको चाप अस्पतालले थेग्नुपरेको छ । बिरामीको चाप बढेपछि कतिपय अस्पतालले भर्ना लिन नसक्ने घोषणा गर्न थालेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. सन्तकुमार दास पनि अस्पतालले थेग्न नसक्ने गरी चाप बढिसकेको बताउँछन् । अस्पतालमा २३० जना संक्रमित उपचाररत छन् । अस्पतालमा भर्ना हुन आउने अधिकांशको अवस्था गम्भीर छ । उनीहरू सबैलाई हाईफ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ । इमरजेन्सीमा पालो कुरेर बस्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । उनका अनुसार अस्पतालले अहिले हाईफ्लो अक्सिजन र जनशक्तिको अभाव बेहोरिरहेको छ । अस्पतालले २५ जना मेडिकल अफिसर र डेढ सय जना नर्स माग गरेको थियो । तर निकै कमले मात्र आवेदन दिएका छन् । जबकि केही समय अघि १५ जना स्टाफ नर्स माग गर्दा १७ सय जनाले आव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराउने उपयुक्त समय आएको : अष्टलक्ष्मी शाक्य
२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिइरहेको बेला राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेताहरुमात्रै होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत सक्रियता बढेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई एमालेको माधव–झलनाथ समूहलाई समेटेर एमालेलाई एकढिक्का बनाउने प्रयासको रुपमा हेरिएको छ । यो सक्रियताले के परिणाम दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ । तर एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराउने उपयुक्त समय आएको बताउँछिन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘म त भन्छु केपी ओलीले हार्नुपर्छ । अहिले त्यो स्थिति बनेको छ ।’ पछिल्लो भेटघाटबारे शाक्यसँग अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी – पार्टीमा बाक्लो भेटघाट चलिरहेको छ, राजनीतिले नयाँ मोड लिने संकेत हो ? पार्टीमा अहिले ठीकै